USB Gland, ịghasa On Waya njikọ, Waterproof Junction Box - Yaonan Electric
Okpo mmiri na Joint
Plastic Ịmụba Ntu
Plastic Waya duct
Plastic Waya Akara
Ịghasa On Waya njikọ
Ọnụ Block PA10
Zhejiang Yaonan Electric Co., Ltd. e hiwere na 2017 na a aha isi obodo nke 10 nde Yuan (N'oge gara aga, aha ya bụ Yueqing Yaonan Electric factory, tọrọ ntọala na 1996). The ụlọ ọrụ dị na China Electric ngwa oru Capital - Liushi, Yueqing, bụ ihe ulo oru na ahia mwekota enterprise, ọkachamara na plastic ngwaahịa, elu na ala voltaji ọkụ ngwa na akwara na mita mmepụta.
The ụlọ ọrụ tumadi na-amị: naịlọn tie, igwe anaghị agba nchara tie, Steel ntu waya kaadị, waterproof cable gland, ọnụ ngọngọ, circuit emebi, pointer mita, digital mita na ike mita wdg Products na-n'ọtụtụ ebe na ọrụ: ígwè, ike, ngwá electronic, nkwukọrịta, agha, na-ano, nkà mmụta banyere ígwè, Petrochemical, ọkụ, okporo ígwè njem na ndị ọzọ ọrụ. Ngwaahịa na-exported ka North America, South America, na Middle East, Africa na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, dị ka ná mba 90 na mpaghara ...
Plastic mgbasa tube
Waterproof Junction Box (With igbochi)
Igwe anaghị agba nchara USB Kee
Naịlọn USB Ties
Gaa Dubai maka ngosi 2
YAONAN electric, na March 2018 isonye na etiti ọwụwa anyanwụ na ọkụ eletrik ngosi, Plastic ngwaahịa na-kwadoro site na ọtụtụ ndị mba ọzọ ọbịa. Nke a oge, anyị otu zitere 7 azụmahịa na technical elites, na-egosi anyị superi ...
Gaa Dubai maka ngosi.
5th n'ala, NANRUIGUOWANG ụlọ, SANTIAOQIAO, LIUSHI, YUEQING, Zhejiang, 325603 CHINA
Kpọọ anyị ugbu a: 0577-62697732